Cabdiraxmaan Cirro oo Iska Casiley Xilkii Guddoomiyaha Gollaha Wakiilada Somaliland | SAHAN ONLINE
Cabdiraxmaan Cirro oo Iska Casiley Xilkii Guddoomiyaha Gollaha Wakiilada Somaliland
HARGEYSA – Guddoomiyaha gollaha Wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa maanta fadhi ay yeesheen Xildhibaanada Somaliland u gudbiyey qoraal uu isku casilayo kana dalbanayo in ay ka aqbalaan codsigiisa.
Waxaa maanta fadhiga gollaha Wakiilada Somaliland joogay 71-xildhibaan oo kamid ah 82-Xildhibaan ee ka tirsan Aqalka Wakiilada maamulka Somaliland.
Is-casilaada Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey Xildhibaano gaaraya 70-mudane,waxaana xilka si kumeelgaar ah u haynaya Kuxigeenkiisa oo diyaarinaya Doorashada Afhayeenka Baarlamaanka oo ay u badan tahay in uu kusoo baxo Siyaasi kasoo jeeda gobolada Bari oo a tirsan Xisbiga Kulmiye.
Musharaxiin badan oo kula la tartamaysay Cabdiraxmaan Cirro xilka Madaxweynaha ayaa ku eedaynaysay in uu isku haysto xilal badan.
Cabdiraxmaan Cirro waa ninkii aasaasay Xisbiga Wadani kadib markii uu ka baxay Xisbiga UCID ,waana musharaxa Madaxweynaha ee Somaliland ee Xisbiga Wadani,wuxuuna Is-casilaadiisa ku sheegay in uu u madaxbannaanaado Ololaha doorashada.
Cabdiraxmaan Cirro ayaa xilka uu maanta iska-casilay ahaa tan iyo sanadkii 2005 oo ahayd doorashada keliya ee Baarlamaani ahayd ee ka dhacday Somaliland,wuxuuna xiligaas ka tirsanaa Xisbiga UCID.
Cabdiraxmaan Cirro ayaa ahaan jiray qunsulkii Soomaaliya u fadhiyey Moscow kadib waxa uu muddo dheer degenaa dalka Finland.
Doorashada Madaxweynaha Somaliland ayaa lagu wadaa in ay dhacdo bisha Nofeember ee sanadkan 2017,waxaana ku tartamaya Muuse Biixi Cabdi,Cabdiraxmaan Cirro iyo Faysal Cali Waraabe oo markii Saddexaad doonaya in uu tartamo.